Enamel Pin, Keychains omenala, Medal Sports, Pin Lapel - Sanjia
Omenala Design Factory ...
Omenala nkọwa Omenala ngwaahịa enamel pin, baajị, nrite, ego, keychain, nkịta mkpado, kọflịnks, eriri ukwu, akara akwụkwọ, wdg E nwere faịlụ imepụta JPG, PNG, PDF, AI, CDR, PSD, wdg. aluminom, ígwè, igwe anaghị agba nchara, ọla kọpa, ọla kọpa, ọla ọcha, wdg. Custom Size Range 1-20cm, ma ọ bụ ndị ọzọ size dabere na gị mkpa. Omenala ọkpụrụkpụ iche 1-10mm, ma ọ bụ ọkpụrụkpụ ndị ọzọ dabere na mkpa gị. Plating Agba nickel / nwa nickel / ndanda ...
Ọla edo plated Metal Badg ...
Nwanyị ọlaedo akpọrọ ...
Ọla edo plated Metal Meda ...
Ogwe osisi ọla ...
Ewute Enamel Pin Cus ...
Ike Enamel Pin Omenala ...
Enamel Pin rụpụta ...
Omenala nkọwa Omenala ngwaahịa enamel pin, baajị, nrite, ego, keychain, nkịta mkpado, kọflịnks, eriri ukwu, akara akwụkwọ, wdg E nwere faịlụ imepụta JPG, PNG, PDF, AI, CDR, PSD, wdg. aluminom, ígwè, igwe anaghị agba nchara, ọla kọpa, ọla kọpa, ọla ọcha, wdg. Custom Size Range 1-20cm, ma ọ bụ ndị ọzọ size dabere na gị mkpa. Omenala ọkpụrụkpụ iche 1-10mm, ma ọ bụ ọkpụrụkpụ ndị ọzọ dabere na mkpa gị. Mgbawa nickel / nickel ojii / an ...
Omenala Design Double-s ...
Omenala nkọwa Omenala ngwaahịa ...
Zinc Alloy Die Nkedo ...
Ugboro abụọ Embossmen ...
Ugboro abụọ kwadoro Metal Coi ...
Ugboro abụọ kwadoro Custom De ...
Omenala Design Soft Ena ...
Omenala ọchịagha S Coi ...
Omenala Mere Marathon M ...
Ahaziri ụmụaka Gradua ...
Omenala Mere Bọọlụ Nkata ...
Mpekere abụọ jikọtara De ...
Aha Ezinaụlọ ...
Ahaziri Badge Set C ...
All nkọwa nwere ike ngwaahia Omenala O ...
Omenala Logo Gold efere ...
Nkọwa niile enwere ike ịhazi ...
Gburugburu udi udi Eff ...
Beer Bottle Ọdịdị 3D D ...
EGO KA MERE ...
Mara mma Animal ike Ename ...
Omenala Printing Metal ...
Anyị factory zuru ezu kwadebere maka onye-nkwụsị customization ọrụ maka Enamel pin badges, ego, medal, keychains ... Anyị nwere ọhụrụ ịkpụzi igwe, anwụ-mgbatị / zọ igwe, sere igwe, polishing igwe, wdg
Anyị factory e gbaara site ISO 9001 na TUV. Anyị nwere usoro njikwa zuru oke iji kwado ngwaahịa niile ị nwetara ruru eru.
Anyị na-enye n'efu ihe ngosi aka na ntughari dabere na atụmatụ mbụ ma ọ bụ nke ndị ahịa. Mmeputa agaghi ebido rue mgbe akwadoro ihe osise.
Anyị bụ ndị isi mmalite emeputa na ọkara akpaka mmepụta akụrụngwa na anyị otu nwere a doro anya nkewa nke ọrụ, nke ukwuu enwekwu anyị mmepụta arụmọrụ.
Mmepe Nke Companylọ Ọrụ
Anyị factory nwere ike ime ọrụ site na imewe / mmemme, na-eme ebu, na-anwụ-mgbatị, polishing, plating, sere, ebi akwụkwọ ka àgwà ego ， nzukọ na nkwakọ. Ọrụ omenala na-akwụsị bụ nnukwu nchekwa na oge na ego.
Zitere anyị ihe ị chọrọ iji nweta nkọwa ziri ezi, ma ọ bụ hapụ email gị, anyị ga-enwe mmekọrịta n'ime awa iri na abụọ.